कैलालीमा देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाए ! पुरा पढ्नुहोस – Complete Nepali News Portal
कैलालीमा देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाए ! पुरा पढ्नुहोस
July 8, 2017	17,409 Views
कैलाली,असार १८ | बाच्नु मात्र पर्छ केके सुन्न र देख्न पाइन्छ भने हो नै रहेछ हाम्रो नेपाली समजामा “भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने भनाईलाई कैलालीका एक युवाले मिथ्या सावित गरेका छन् । आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजुलाई गर्भवती बनाएर ती युवाले यस्तो हर्कत देखाएका हुन् । प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्की चुहा–१३ मलभंगामा एक १७ वर्षीय देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाएका हुन् ।
दाजु विदेश गएको मौका पारी भाउजुसँग सल्किएका ती देबरले एक छोरीकी आमालाई गर्भवती बनाएका हुन् । श्रीमान विदेश गएको १ वर्ष पछि ती महिला गर्भवती भएकी थिइन् । गर्भवती भएकी ती महिलाले लाजै पचाएर ससुरालाई पेट सुनियो भनी झुट्टो बोलेर उपचारको बाहनामा अस्पताल गएपछि गर्भवती भएको रहस्य खुलेको हो । उनका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा मलेशीया छन् । श्रीमान् नभएको मौकामा ती महिलाले कान्छा ससुराका कान्छा छोरा देवरंं सिद्ध देवकोटासँग लसपस गरेकी थिइन् ।
महिलाले देवकोटाकै गर्भ रहेको स्वीकार गरेपछि ससुराले बुहारीलाई घरमा नराख्ने बताएका छन् । ती महिलाले देवरलाई घरमै बोलाएर यौन सम्बन्ध राख्ने गरेको पनि स्वीकार गरेकी छिन् । यौन सम्पर्क गर्ने देवर भने २ महिनादेखि भारतमा रोजगारी गर्दै आएका छन् । पारिवारिक स्रोतका अनुसार देवकोटाले आफुलाई भाउजुले जवरजस्ती यौन सम्पर्क गर्न लगाएको बताएका छन् । – साझापेज बाट